सरकारी अलमल र नागरिकको हेलचेक्य्राइँको उपज ओमिक्रोन उछाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सरकारी अलमल र नागरिकको हेलचेक्य्राइँको उपज ओमिक्रोन उछाल
ओमिक्रोन फैलिनुमा नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरूले सार्वजनिक सभा-समारोह तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सक्थे । तर उनीहरूको ध्यान कहिल्यै पनि त्यसमा पुगेन । नेताहरूले नै बाटो बिराएपछि जनताको त के कुरा गर्नु ?
पुस २८, २०७८ स्वरूप आचार्य
काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्न थालेसँगै नेपाली अस्पतालमा पूर्वाधारको अवस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रको तयारीलाई लिएर पुन: बहस प्रारम्भ भएको छ । संक्रमण घटेपछि दु:ख पाएका दिन बिर्सिने र संक्रमण बढेसँगै फेरि यो किन भएन र त्यो किन भएन भनेर प्रश्न गर्नु आफैंमा विरोधाभास पूर्ण छ ।
नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रका स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पतालहरूले पछिल्लो उछालका बेला भोग्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएका छन् । त्यसको प्रशंसा गरिनै पर्छ । तर अहिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण पछिल्लो सबै तयारी माथि फेरि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था भने सिर्जना हुने नै देखिन्छ । त्यसको जिम्मेवारी सरकारले मात्रै नभएर जनताले पनि लिनुपर्छ ।
ओमिक्रोन फैलिनुमा नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरुले सार्वजनिक सभा-समारोह तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न सक्थे । तर, उनीहरुको ध्यान कहिले पनि त्यसमा पुगेन । नेताहरुले नै बाटो बिराएपछि जनताको त के कुरा गर्नु?
जे नहुनु त्यो भइसकेपछि अब यो उछालबाट आफू र आफ्नालाई जोगाउन फेरि माथापच्ची गर्नुको विकल्प कसैसँग छैन । कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’ले यसअघि फैलिएको भरिएन्ट ‘डेल्टा’ भन्दा केही कम जोखिममा पुर्‍याउने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ र तथ्यांकले पनि त्यसलाई केही हदसम्म सही ठहर्‍याउँछ ।
अहिले यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नै हो । डेल्टाले ल्याएको उछालमा अहिले देखिएभन्दा कम संक्रमित देखिँदा नै त्यहाँका अस्पतालहरु भरिपूर्ण अवस्थामा पुगेका थिए । तर अहिले खोपको पहुँचको कारण डेढदेखि दुई हजार मानिसलाई मात्रै अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको छ ।तर, यो जुन गतिमा फैलिन्छ त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
सिभिल अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत सघन उपचार विशेषज्ञ डा. प्रदीप तिवारी यसमा सहमत छन् । उनका अनुसार ओमिक्रोन डेल्टाभन्दा कम घातक भएको दाबी सही भए पनि डर मान्नुपर्ने कारण यसको संक्रामक क्षमता हो ।
संक्रमण रोकथाममा सधैं भद्रगोल
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीका अनुसार पनि अहिले बढेको संक्रमणको स्पष्ट असर देखिन ५ देखि ७ दिन लाग्छ । अनि मात्रै अस्पतालहरुमा प्रभाव पर्छ । तर, पहिलेभन्दा अहिले अस्पताल पूर्वाधारमा धेरै नै बढोत्तरी गरिएकोले सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ ।‘ओमिक्रोनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै यो डेल्टाभन्दा ३० गुणा बढी संक्रामक छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसका कारण जटिलता कम भएपनि संक्रमण अत्याधिक फैलिएपछि त्यसको प्रभाव अस्पतालमा पर्ने देखिन्छ ।’
डेल्टाभन्दा धेरै गुणा बढी द्रुत गतिमा फैलिने यो ओमिक्रोनले अन्तत: यति धेरै मानिसलाई संक्रमित गराउँछ कि हाम्रो स्वास्थ्य संयन्त्रले त्यसलाई धान्न नसक्ने स्थिति आइपर्न सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार डेल्टाका कारण अस्पताल भर्ना हुनेको दर विश्वमा २० देखि २३ प्रतिशतसम्म देखिएको थियो । ओमिक्रोनमा भने अस्पताल भर्ना हुने दर ७ देखि १० प्रतिशत मात्रै छ । तर, यसको फैलिने दर डेल्टाभन्दा ३० गुणा धेरै रहेको छ । मुख्य डर यही नै हो ।
नेपालमा पहिला पनि मुख्य गरेर भारत र केही हदसम्म अन्य मुलुकबाट भित्रिएका व्यक्तिहरुबाटै कोरोना फैलिएको थियो । यो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले योपटक सीमा नाकामा कम्तिमा भित्रिनेहरूको परीक्षण र क्वारेन्टाइन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो गर्न सरकार फेरि पनि चुकेको छ । विभिन्न नाकामा बनाइएका क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू अझै तयार भएका छैनन् । र, अत्यन्त आवश्यक परेको समयमा तयार हुने अवस्था पनि निकै कम छ ।
खोप केन्द्र बढाउन माग
त्यसमाथि पनि डेल्टाको गतिलाई रोक्न धेरै हदसम्म खोप कारगर रहेको पुष्टि भएको बेलामा ओमिक्रोनलाई रोक्न भने त्यो सफल छैन । दुई डोज खोप लगाए पनि वा तीनै डोज खोप लिएपनि व्यक्ति संक्रमित हुनसक्छन् । र, सो व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई पनि संक्रमित बनाउन सक्छन् । कुनैपनि खोपको दुई मात्राले व्यक्तिलाई जटिल प्रकारको संक्रमण हुनबाट डेल्टाको तुलनामा ३० प्रतिशत मात्रै जोगाउने देखिएको छ । दोस्रो खोप लगाएको जति बढी समय भयो त्यति नै प्रभावकारिता कम हुने अध्ययनमा देखिएको हो । त्यसैले ओमिक्रोनबाट जोगिनका लागि खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाउनैपर्ने भएको हो । यो प्रमाणित तथ्य हो ।
त्यसो भए खोप किन लगाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । विज्ञहरुका अनुसार खोप कोभिड–१९ रागका कारणबाट हुने जोखिम वा अस्पताल भर्ना हुनबाट जोगिनका लागि लगाउने । उनीहरुका अनुसार पछिल्ला दिना विश्वमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले ताण्डव मचाउनुको प्रमुख कारण खोप नलगाएकाहरुको संख्या ठूलो भएर नै हो । खोप लगाउनेहरु संक्रमित भएर अस्पताल पुगेपनि उनीहरुमा कोभिड–१९ का जटिलता कम छन् भने अस्पताल बसाइँ पनि थोरै छ ।
नेपालजस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधार सीमित भएको देशमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था कम हुनु भनेको पनि कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ । तर, सरकारले सोचे जस्तो रुपमा खोप लगाउन सकेन र मानिसहरुमा पनि खोप लगाउन केही हिच्किचाहट रहेको पाइएको छ । नेपालीहरुमा पश्चिमा समाज जस्तो ‘एन्टी भ्याक्सिन सेन्टिमेन्ट’ (खोपविरुद्धको मानसिकता) त कम देखियो तर, सुविधाजनक रुपमा खोप नपाउँदा धेरैले लगाउन वेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।
सरकारको उदासीनता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । नयाँ उछालको समयमा सबैभन्दा धेरै खट्नुपर्ने जनशक्तिलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्र दिएर सुरक्षित राख्न जरुरी छ भन्ने महसुस सरकारले गरेको देखिएको छैन । सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी ‘फ्रन्टलाइनर’लाई समय छँदै खोप लगाउन ढिला गर्नु हो । साथै दीर्घरोगी र ६० वर्षभन्दा माथि पुगेका सबैलाई पनि अतिरिक्त मात्रा दिएको भए अझ उचित हुन्थ्यो । तर, सरकारले यसतर्फ ध्यान नै पुर्‍याएको देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि महामारीमा ज्यान जोगाउन धेरैले अनौपचारिक रुपमा अतिरिक्त खोप लगाएका पनि छन् । पहुँच हुनेहरुले त्यस्तो अवसर पाए पनि आमसर्वधारण भने त्यो सुविधाबाट धेरै टाढा छन् ।
सरकारको पुस २६ गते सोमबार खोप नलगाउनेहरुलाई सार्वजनिक सेवामा बन्देज गर्ने निर्णयमाथि पनि बहस सुरु भएको छ । खोप चेतनाका हिसाबले यसलाई पूर्ण रुपमा गलत भन्न मिल्दैन । यद्यपि विज्ञहरु यस्तो निर्णयका लागि समय गलत भएको तर्क गर्छन् । समुदायस्तरमै ओमिक्रोन फैलिएको बेला जनतालाई बलजफ्ती खोपकेन्द्र बाहिर खोप लगाउन लाइन बस्न बाध्य पारिनु जोखिम पूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ । दोस्रो लहरका बेला पनि खोप कार्यक्रम संचालन हुँदा केन्द्रमा खोप लगाउन गएकै बखत संक्रमित हुनेको संख्या उल्लेख्य देखिएको थियो ।
तसर्थ, अबको चुनौती भनेको ओमिक्रोनको उछाललाई रोक्न जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुका साथै खोप केन्द्रमा भीडभाड हुन नदिन जे जति गर्न सकिन्छ त्यो गम्भीरताका साथ गर्ने । यति गर्न सकिए पनि धेरै हदसम्म तेस्रो लहरबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । अबको लक्ष्य क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो, नियन्त्रण गर्ने वा रोक्ने अवस्थालाई हामी धेरै पछाडि छोडिसकेका छौं ।
प्रकाशित : पुस २८, २०७८ १४:५४
प्रधानमन्त्रीबाटै प्रदेश उपेक्षित
महानगरको बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित
हेमन्त जोशी, विनोद भण्डारी, भूषण यादव, शंकर आचार्य, रमेशकुमार पौडेल, दीपक परियार
‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शिक्षण संस्था नेपालमै छन्’
स्वदेशी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न एडुफेयर
स्थानीय तह बजेट : ७०० ले ल्याए, ५३ को स्थगित